Warshad Carbide Endmill - Soosaarayaasha Carbide Endmill, Alaab-qeybiyeyaal
Qalabkani wuxuu khuseeyaa soosaarka waxtarka sare ee birta, birta la tuuro HRC≤48⁰ Iyadoo la adeegsanayo naqshadda biibiile ee xagal helix aan sinnayn, garoonka oo aan loo sinnayn, hoos u dhigista qashin-qubka. sanka.
Ku habboon waxsoosaarka wax-soo-saarka sare ee aaladaha titanium-ka ee loo yaqaan 'Alloys titanium alloys iyo steel ahama' iyadoo la adeegsanayo naqshadda biibiile ee xagasha aan caadiga ahayn ee loo yaqaan 'helix angle 38 pitch 41⁰', garoonka oo aan loo sinnayn, isla markaana loo siman yahay, oo la yareeyo leexashada birta, waxqabadka sare iyo tayada dhammaystirka dusha sare.
Qalabka waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa sameynta caaryada, warshadaha gawaarida iyo wixii la mid ah. Waxaa lagu dabaqi karaa dhameystirka semi-finalka iyo dhameystirka qalabka adag ee HRC 50～68⁰.waxa la jari karaa biraha la adkeeyay, biraha la adkeeyay, birta la tuuro, birta ductile, lagu rakibo 3 dhidib iyo 5 dhidibka mashiinka CNC. Naqshad gaar ah oo leh U jeexdin ilaa ugu badnaan dhexroorka aasaasiga ah, hagaajinta qalafsanaanta iyo ka-saarista qashinka, waxay kordhisaa waqtiga nolosha ee dhamaadka wax-qabadka. Iyada oo la kontaroolayo tayada sare ee saxda ah, lagu gaaro geeddi-socodka wanaagsan ee maaddada birta adag.